Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Ilifu elinetyhefu ngaphezulu kweJamani emva kokuqhuma kweMichiza
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Yayilusuku oluhle kakhulu esibhakabhakeni esiluhlaza eDuesseldorf naseCologne, eJamani de kwaqhushumba ipaki yemichiza eLeverkusen ibangela ilifu letyhefu ukubaleka.
Kwiveki ephelileyo izikhukula kwakuloo mmandla zibangele intlekele kunye nokufa. Namhlanje kukuqhuma eChempark Leverkusen, phakathi kweDuesseldorf kunye neCologne kwilizwe laseJamani laseNorthrhine Westphalia.
Namhlanje uqhushumbo olukhulu lunyanzela abantu abakwingingqi enye ukuba bangene kwenye imo yentlekele, ebangela elona nqanaba liphezulu lokulumkisa emva kokuba ifu yetyhefu ibangelwe.
IChempark Isasazeka kwizixeko ezithathu eLeverkusen, eDormagen naseKrefeld-Uerdingen ngokulinganisa ngokulinganisa i-13.3 yeekhilomitha, ezihlala ngaphezulu kweenkampani ezingama-60 kwaye ziqeshe abantu abangama-50,000.
Umzi mveliso wezonyango waseBayer yinxalenye yesi sakhiwo. Oohola bendlela abaninzi kunye noololiwe abakhulu be-intercity kunye noololiwe bendawo badibanisa iindawo ezinkulu zedolophu ngokubona kumzi-mveliso.
Ngale ntsasa uqhushumbo olukhulu lubangele ilifu elinetyhefu ukuba libaleke kwaye ngoku liya ngakwisixeko saseLeichlingen naseBurscheid kwisithili sothando saseBergischer. Iidolophu zaziwa ngokuhlala kwiindawo eziphantsi kunye nedolophu enendawo yentengiso kunye neecawe.
Abaqhubi be IChempark indawo kwi Leverkusen uthe unobangela wokuqhuma awukacaci.
Iarhente yaseburhulumenteni yokukhuselwa kwabemi, kunye neearhente zeentlekele zikwahlulahlula ukuqhushumba njengemeko eyingozi kakhulu kubemi bendawo, ukuyalela abantu ukuba bahlale ngaphakathi kwaye bavale iingcango kunye neefestile.
I-Currenta berichtete, Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr kunye neLuftmesswagen seien im Einsatz.